Warbixinta Dowladda ee todobaadkii tagay iyo wixii u qabsoomay Hiiraan | Hiiraan Net | Wararka somalia | Somali news | Warar, Quraan iyo Tafsiir.Hiiraan | Hiiraan Net |
Warbixinta Dowladda ee todobaadkii tagay iyo wixii u qabsoomay
Muqdisho; HN;- Wasiirka Warfaafinta Mudane Mustafa Sheikh Ali Dhuhulow ayaa ka warbixiyey horumarka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay. Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin; Booqashadii uu Madaxweynahu ku tagey Baraawa, Horumarka Waxbarashada Dalka, Xaalada Degmada Ceelbuur, Kulankii Madaxweynaha iyo hay’adaha MEDEF, Horumarka Howlgalada Badweynta Hindiya, Xuska Maalinta Calanka Soomaaliyeed iyo Dib u habeynta Garsoorka Dalka.
Wasiirka Warfaafinta oo hadalkiisa ku bilaabay booqashadii Madaxweynaha uu ku tegey Baraawe ayaa yiri “Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 11kii Oktober booqday degmada Baraawe oo ah goobihii ugu danbeeyey ee laga xorreeyey kooxaha argagaxisada ee Al-Shabaab.
Madaxweynaha ayaa si diirran loogu soo dhaweeyay magaalada Baraawe, iyadoo shacabka ku dhaqan magaaladaasi aysan u kala harin soo dhaweeynta madaxweynaha. Madaxweynaha ayaa la hadlay dadka ku dhaqan Baraawe, kuwaasoo isugu soo baxay meel fagaare ah, iyagoo lulayay calanka jamhuuriyadda, islamarkaana kor u qaadayay heeso wadani ah oo qiiro leh. Hoggaamiyayaasha Dhaqanka ayaa wax aay ka codsadeen madaxweynaha dhowr arrimood oo ay ugu muhiimsan yihiin sugidda amniga, fidinta daryeel caafimaad oo aan hadda jirin iyo in gurmad raashin oo deg deg ah lala soo gaaro dadweynaha degaanka.
Madaxweynuhu wuxuu dadweynaha Baraawe ugu hambalyeeyay in ay ka xoroobeen kooxda al Shabaab, wuxuuna u sheegay in Dowladdu ay culeyska saareyso sidii ay wax uga qaban lahayd baahida dhinacyada badan ee ay nabaddoonnada Baraawe ay u soo jeediyeen Dowladda. Madaxweynuhu wuxuu ugu baaqay qurbajoogta Soomaaliyeed in ay u soo gurmadaan magaalada Baraawe iyo guud ahaanba Gobolka Shabeellada Hoose. Mudane Xasan Shiikh Maxamuud wuxuu sheegay in Baraawe ay tahay magaalo leh ilbaxnimo fog iyo xadaarad Islaami ah, haddana lagu dadaali doono sidii loo soo celin lahaa wax soo saarka degmada. Madaxweynuhu wuxuu mar kale ku celiyay in loo baahan yahay in dhallinyarada Shabaab xubnaha ka ah, hadday ka tanaasulaan fikirka al Shabaab loo baahan yahay in la cafiyo loona sameeyo dhaqan celin. Dhoofinta dhuxushu ayuu Madaxweynuhu sheegay in ay tahay mid sharci darro ah, isla markaana aan dowladdiisu aqbali doonin in dhuxul la dhoofyio.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey horumarka Waxbarashada Dalka ayaa yiri “Waxaa farxad ah in markii ugu horreysey 24sano ka dib ay Jaamicadda Ummadda Soomaaliyeed bilowday waxbarasho tayo leh, tanoo ah horumar ballaaran ee dhanka waxbarashada Soomaaliye.
Sidoo kale 14kii Oktober 2014 Danjiraha Dowladda Turkiga u fadhiya dalka Soomaaliya Olgen Bekar ayaa 450 Kumbuyuutar ku wareejiyay dallad ay ku mideysan yihiin jaamacado Soomaaliyeed oo lagu magacaabo SomaliREN, kaddib xaflad lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ay ka qeyb galeen wakiilo la socday jaamacadaha. Guddoomiyaha SomaliREN Daahir Xasan Cabdi “Carab” ayaa u mahad celiyay dowladda Turkiga oo markii labaad deeq noocaan ah siisay jaamacadaha dalka, isagoo tilmaamay in qalabkaan loo qeybin doono jaamacadaha ku yaalla Puntland, Somaliland iyo koofurta waddanka. Maamuleyaasha jaamacadaha ayuu ugu baaqay inay qalabkaan uga faa’iideystaan xarumahooda si sare loogu qaado awoodda hay’adaha waxbarashada sare ee waddanka.
Sidoo kale dowladda Turkiga ayuu ku amaanay dowrkeeda ku aaddan horumarinta waxbarashada Soomaaliya ayadoo qalabkaan ka sokoow waxbarasho lacag la’aan ah siisasay kumannaan Soomaali ah oo isugu jira arday iyo macallimiin. Danjiraha dowladda Turkiga u fadhiya Muqdisho Olgen Bekar ayaa sheegay in Soomaaliya ay cagta saartay waddadii horumarka, dowladdiisuna ay ku taageereyso shacabka Soomaaliyeed tallaabadaas. Wuxuu tilmaamay in Turkigu uu sii wadi doono taakuleynta uu siiyo bahda waxbarashada dalka si loo hormariyo awooddooda iyo xirfaddooda.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey Xaalada Ceelbuur ayaa yiri “14kii Oktober 2014 ayaa Wafdi ka socda Wasaaradda Arrimaha Gudaha, AMISOM iyo Qaramada Midoobay ay 14kii Oktober 2014 gaareen degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayigoo halkaasi warbixinno kaga dhageystay saraakiisha ciidamada xoogga dalka. Ujeedada socdaalkan ayaa ahaa sidii loo gaari lahaa dadka deegaanka oo loona qiimeyn lahaa xaaladda dhabta ah ee halkaasi ka jirta. Wafdiga ayaa kulamo la qaatey saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa AMISOM, kuwaasi oo warbixin kooban wafdiga ka siiyay xaaladda magaalada. Sidoo kale wafdigan isugu jira xubno ka kala socday Wasaaradda Arrimaha gudaha, Qaramada Midoobay, iyo Midowga Afrika ayaa waxa ay kormeereen cisbitaalka degmada Ceelbuur, halkaasi oo ay agabyadii yiilay ay bili-liqeysteen maleeshiyaadka Shabaab ka hor inta aysan ciidamadu halkaasi kala wareegin. Wafdigan ayaa xusay in magaalada ay ka jirto xaalado beni’aadanimo aad u liidata, waxaana uu intaa ku daray in tuulooyinka hoos yimaada Degmada ay ku dhibaateysanyihiin shacab fara badan oo markii hore Ceelbuur ka cararay.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey Madaxweynaha oo la kulmay hay’adaha MEDEF ayaa yiri “Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Shiikh Maxamud, oo socdaal ku joogay dalka Faransiiska ayaa 15kii Oktober kulan kula yeeshay magaalada Paris hey’adda MEDEF oo ay xubno ka yihiin in ka badan 6,000 oo sharikadaha dalka Faransiiska ah, wakiilna ka ah Sharikado Caalamka ku filiqsan oo tiradoodu ay ka badan tahay 800,000 oo qaar badan oo ka mdi ahi ay ka howlgalaan qaaradda Afrika. Madaxweynaha ayaa sharikadahaas ku dhiirri geliyay in ay maalgeashi ka sameeyaan Soomaaliya oo uu sheegay in ay hadda dib u dhismeyso. Madaxweynuhu wuxuu sharikadahaas uu u ballanqaaday in heshiiska ay la galaan Soomaaliya uu fursad labada dhinacba siinaya oo kobcinaya dhaqaalaha Soomaaliya iyo kan shirkadaha maalgashiga ku sameeya Soomaaliya. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya xarunta Midowga Yurub, Dr. Cali Saciid Faqi, oo isagu shirka soo qaban qaabiyay ayaa ku tilmaamay in shirkani yahay mid wax weyn ka taraya isku xirka ganacsatada iyo sharikadaha Soomaalida iyo kuwa dalka Faransiiska. Arrinkan ayaa muujinaya horumarka Soomaaliya ka jira iyo sida ay caalamku ugu dhiiranayaan inay maalgashi ku sameeyaan.
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey horumarka howlgalada Badweynta Hindiya ayaa yiri “Ciidanka Dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa wada howlgalka Badweynta Hindiya oo lagula dagaalayo kooxaha argagaxisada ah ee Al-Shabaab. Ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Bakool ayaa maleeshiyaadka Al-Shabaab kala wareegay tuulooyin hoos taga degmooyinka Waajid iyo Teyeglow kaddib howl gallo ay ka sameeyaan halkaasi 14kii Oktober 2014. Ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa howl gal ballaaran oo ka dhan ah kooxada Al-Shabaab ka wada gobollada dalka oo ujeedadu tahay in goobaha laga saaray Al-Shabaab la xasiliyo isla markaasna loo diido inay dib ugu soo laabtaan. Degmooyinkii dhowaan laga saarayna waxaa ka socda howlgalo lagu xailinayo amniga deegaanadaas sida Baraawa, Cadale iyo goobo kale.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey xuska maalinta Calanka ayaa yiri “12kii Oktober 2014 ayaa ku beegneyd 60 guuradii maalintii Soomaaliya ay yeelatay Calan oo aheyd 12kii Oktober 1954. Madaxda Qaranka ayaa Muqdisho uga qeybgalay munaasabad lagu weyneynayo maalintan muhiimka ah. Sidoo kale gobolada dalka ayaa laga xusay maalinta Calanka Soomaaliya. Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo Madaxweynaha ayaa ka hadlay munaasabadan isla markaana sheegeen in Calanka loo soo maray dadaal oo muwaadiniin Soomaaliyeed u soo halgameen. Waxeyna sheegeen inay muhiim tahay in la xuso, la weyneeyo, isla markaasna looga sheekeeyo shacabka iyo dhalinyarada si ay u oggaadaan taariikhda dalkooda. Soomaaliya oo dagaal kula jirta fikirka argagaxisada caalamiga ah ee Al-Qaeda, ISIS iyo Al-Shabaab ayaa la aaminsanyahay in weyneynta Calanka, taariikhda iyo horumarka ay kaalin weyn ka qaadanayaan ka hortaga fikirka qaldan ee kooxaha argagaxisada.”
Wasiirka Warfaafinta ayaa ugu danbeyntii ka hadlay Dib u habeynta Garsoorka Dalka oo uu yiri “Waxaa 17kii October 2014 Muqdisho lagu soo gabogabeeyey Shirweynaha looga arinsanayey xeerka nidaamaka gorsoorka, xeerka samaynta maxkamada Dasrtuuriga iyo hirgalinta qorshaha dib uhabaynta hay’adaha cadaalada dalka oo Shan maalmood socday. Waxaana shirweynahan ka soo qeybgalay Garsoorayaal ka kala yimid gobollada dalka, Qareeno, Culumada diinta, Ururada bushada riydka qaarkooda iyo Aqoon yahano khibrad u leh Garsoorka. Wasiirka Garsoorka & Arrimaha Dastuurka Mudane Faarax Cabdulqaadir ayaa sheegay in ujeedada shirkan uu yahay in laga arinsado hormarinta Caddaalada oo horseed u ah dowladanimada. Qodobadii laga soo saaray shirkan waxaaa ka mid ahaa; In si haboon loo kala saaro awoodaha Maxkamadaha heerka Federaalka iyo kuwa gobolada. Shirkan waxaa lagu taageeray in la dhiso Maxkamadda Dastuuriga ah sida uu qabo Dastuurka dalka. Waxaana laga codsaday Baarlamaanka inuu ansixiyo qodobada ka soo baxay shirkan. Wasiirka Garsoorka & Arrimaha Dastuurka ayaa sheegay qodobada shirkani ka soo baxay ay noqon doonaan qodobo tiir dhexaad u noqon doona xeerka Garsoorka dalka ismarkaana ay sii wadayaan latashiyada lagu hormarinaayo cadaalada dalka.